Burma Partnership » U Win Tin
Posts Tagged ‘U Win Tin’ (12 found)
We, the undersigned 17 organisations, are calling on people worldwide to wearablue shirt or blue clothing on Tuesday April 21st, the first anniversary of the death of U Win Tin, in support of political prisoners still in jail in Burma/Myanmar […]
April 14, 2015 • By 17 Civil Society Organization • Tags: Burma Campaign UK, Political Prisoners, Prisoners of Conscience Affairs Committee, U Win Tin • Read more ➤
Reporters Without Borders is deeply saddened to learn of the death of the dissident journalist Win Tinin Rangoon on 21 April. Burma has lost one of its staunchest defenders of democracy and freedom of information […]
April 23, 2014 • By Reporters Without Borders • Tags: Freedom of Expression, Reporters Without Borders, U Win Tin • Read more ➤
Condolences on the Death of U Win Tin
U Win Tin wasahero of Burma’s democracy movement. He was never intimidated, never lost hope, and never stopped working foragenuinely democratic Burma […]
April 21, 2014 • By Burma Campaign UK • Tags: Burma Campaign UK, U Win Tin • Read more ➤
The elections, scheduled for Nov. 7, are designed to legalize military rule in Burma under the 2008 constitution, which was written to createapermanent military dictatorship in our country […]
September 30, 2010 • By U Win Tin • Tags: 2010 Elections, Commission of Inquiry, National League for Democracy, U Win Tin • Read more ➤
“ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ” အီးဘွတ် ၈၈ အရေးတော်ပုံ ၂၂ နှစ် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မိုးမခက ဖြန့်ချိ
စစ်အစိုးရ အလိုကျ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၊ NLD ပါတီ၏ ရပ်တည်ဖြတ်သန်းမှုနှင့် မြန်မာပြည်အရေး အင်တာဗျူးများ စုစည်းတင်ဆက်ချက် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မိုးမခက ဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း အင်တာဗျူးဆောင်းပါးများကို တစုတစည်းတည်း အီးဘွတ်အဖြစ် ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီအရေး ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ ၂၂ နှစ်ပြည့်မှာ အမှတ်တရ အလေးပြုပြီး ထုတ်ဝေတာ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ ၂၀၁၀ စစ်အစိုးရရွေးကောက်ပွဲ အရှုပ်အထွေးကာလမှာ ဆရာဦးဝင်းတင်ရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ အတွေးအမြင်၊ အင်န်အယ်ဒီပါတီရဲ့ ၂၀၁၀ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းကို မည်သို့ တစုတစည်းတည်း ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းပုံနဲ့ ကြုံတွေ့ရုန်းကန်ရမှုတွေကို သည်အင်တာဗျူးမှတ်တမ်းကနေ သမိုင်းစာမျက်နှာအဖြစ် မော်ကွန်းထိုးတဲ့အနေနဲ့ မိုးမခစာနယ်ဇင်းအဖွဲ့က ကြိုးပမ်းတင်ဆက်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
August 7, 2010 • By Moemaka Media • Tags: National League for Democracy, U Win Tin • Read more ➤